Juventus Oo Si Layaableh Hogaanka Ugu Qabtay Tartanka Matthijs De Ligt Iyo Saddexdan Sababood Oo Old Lady Caawinaya. - Gool24.Net
Juventus Oo Si Layaableh Hogaanka Ugu Qabtay Tartanka Matthijs De Ligt Iyo Saddexdan Sababood Oo Old Lady Caawinaya.
Kooxda Juventus ayaa si layaableh u qabtay hogaanka tartanka loogu jiro kabtanka kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt kadib markii ay horumar cajiib ah ka sameeyeen wada xaajoodkii ay la yeesheen wakiilka 19 sano jirkan ee Mino Raiola.
Maalmihii ugu danbeeyay kooxaha PSG iyo Juventus ayaa ahaa labada kooxood ee ugu cad cad ee loo saadaalinayay in ay ku guulaysan doonaan saxiixa Matthijs de Ligt laakiin hadda war cusub oo soo baxay ayaa sheegaya in Juventus ay hogaanka si buuxda u qabtay.
Wariyaha caanka ah ee Gianluca di Marzio ayaa shaaciyay in Juventus ay hadda maamulka u qabtay tartankii loogu jiray saxiixa xidiga kooxda Ajax iyo xulka Netherlands ee De Ligt.
Gianluca di Marzio ayaa yidhi: “Wada hadalada Juventus iyo Ajax ee Matthijs de Ligt ayaa la filayaa barri , xaaladu waxay gacmaha ugu jirtaa Juventus kadib fashilkii in Paris Saint Germain iyo Barcelona ee ahaa in ay heshiiska dhamaystiraan.”
Gianluca di Marzio ayaa xaqiijiyay in kadib markii ay kooxaha Barcelona iyo PSG ku fashilmeen in ay dhamaystiri karaan heshiiska De Ligt oo ay haddaba kooxi ku dhawayd in ay hadda Juventus heshay fursad ay xalaada gacamaheeda soo galisay.
Arintani lama micno aha in wali wax heshiis ah ay Juvnetus la dhamaystirtay Matthijs de Ligt balse waxay waxay noqotay kooxda hadda wada xaajoodka ugu xoogan la galaysa wakiilkiisa Mino Raiola iyo kooxdiisa Ajax si heshiiska loo dhamaystiri karo.
Haddaba maxay yihiin Saddexda Sababood ee Juventus Ka caawin kara in Ay Ku guulaysato saxixia Matthijs de Ligt?
1- Xidhiidhka Fiican ee Ka Dhexeeya Maamulka Juventus iyo wakiilka Matthijs de Ligt Ee Mino Raiola.
Kooxda Juventus iyo wakiilka Matthijs de Ligt ee Mino Raiola waxaa ka dhexeeya xidhiidh fiican wuxuuna wali xusuusanayaa heshiiskii rekoodhka aduunka ahaa ee uu Juventus iyo Manchester United iskugu soo jiiday ee heshiiskii Pual Pogba.
Markale waxa uu Raiola doonayaa in uu Pual Pogba ku soo celiyo Juventus laakiin waxaa xaalada xidhiidhkooda sii laba jibaari kara in uu Juventus ka caawiyo dhamaystirka heshiiska Matthijs de Ligt.
Wakiilka Matthijs de Ligt ee Mino Raiola waa shaqsiga sababta buuxda u ah in maalinba ay kooxihi hogaanka u hayso tartanka xidigan, sababtoo ah waxa uu doonayaa kooxda ugu dalabka fiicnaata ee uu ka heli karo dilaalka ugu badan isla markaana uu da’yarkani ka heli karo fursad uu ku ciyaaro iyo mushaar fiican.
Haddii ay Juventus damaanad qaado in Mino Raiola uu heli doono lacagta dilaalka uu ku doonayo saxiixa Matthijs de Ligt isla markaana ay dalab ku qancin karaan kooxda Ajax waxaa soo raacaysa in ay De Ligt u damaanad qaadi karaan in uu boos joogto ah heli doono iyo in mushaar fiican uu qaadan doono.
Qodobadan aan soo sheegnay waa dhamaan qodobo horyaalada maamulka kooxda Juventus si ay xaalada ay hadda heleen uga faa’iidaysan karaan oo ay ku dhamaystiri karaan heshiiska Matthijs de Ligt.
Riix 2,3 si aad faah faahinta u wada akhrisato